From September 26 to 29, 2018, the 7th Indonesian International Furniture Accessories and Woodworking Machinery Exhibition was held at the Jakarta International Exhibition Center in the Indonesian capital. ဆက်ဖတ်ရန် »
On the 14th May, 2018, to celebrate the llth anniversary of the establishment of Shandong Senmao Machinery Co., Ltd,our chairman, Mr. Dexue Ma, organized the tourist to Mount Tai. It was also the company’s annual collective travel time. Shandong Senmao Machinery Co., Ltd is an...ဆက်ဖတ်ရန် »
[တင်ပို့ခြင်း] Senmao Machinery Co. , ,. ထံမှပစ္စည်း Ltd. , ဟာဖောက်သည်ရန်
ဒါဟာယနေ့အလုပ်များနေ့ကဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသင်္ဘောပြင်ဆင်နေ: ကော်ဖြန် 3sets; ဓာတ်လှေကားစားပွဲပေါ်မှာ 2sets; အော်တိုအစွန်းလွှ; အအေးစာနယ်ဇင်းစက်ပူသတင်းစာစက်နှင့်ဒါပေါ်မှာ။ ငါးကွန်တိန်နာတင်ပို့ပါလိမ့်မည်။ ရှန်ဒေါင်း Senmao Machinery Co. , Ltd မှသုတေသနအထူးပြုသူတစ်ဦးဘက်ပေါင်းစုံလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ...ဆက်ဖတ်ရန် »
[New ကိုကော်ဖြန်] Senmao Machinery Co. , Ltd သစ်ကိုကော်ဖြန်သုတေသနပြုခြင်းနှင့်တီထွင်
Recently, Shandong Senmao Machinery researched and developedanew chrome treated roller glue spreader. The diameter is 405mm. It has the natural environmental steel roller. The diameter is 200mm, the weight is 1.8T and the length of the roller is 1500mm. Overall Size: 2500*1100*1680mm Total ...ဆက်ဖတ်ရန် »